राम कार्की ‘पार्थ’ - कान्तिपुर समाचार
राम कार्की ‘पार्थ’का लेखहरु :
अस्थिरता, असमानता र स्वेच्छाचारिता पुँजीवादको नैसर्गिक र स्थायी चरित्र हो । यी सबै हुँदा हुँदै पनि पुँजीवाद हाम्रा अग्रज माक्र्सवादीहरुले अपेक्षा गरे अनुसार समाजवादी क्रान्तिद्वारा प्रतिस्थापित हुन सकेन । अहिलेसम्म विश्व पुँजीवादी व्यवस्थामा आएका संकटहरुलाई टार्न पुँजीवाद सफल देखिएको छ ।
साथी घनश्याम, कुन बाटो ? मूलबाटो ?
विचार जबसम्म केवल विचार रहन्छ अस्पष्ट रहन्छ प्रशंसनीय रहन्छआपत्तिले टाउको उठाइहाल्छजब योजनामा ढल्न थाल्छ विचार–बर्तोल्त ब्रेख्त